Dab xoogleh oo maanta Baabi'iyay Xero qaxooti oo ku taala Boosaaso – SBC
Dab xoogleh oo maanta Baabi'iyay Xero qaxooti oo ku taala Boosaaso
Maanta xili Duhur nimadii waxaa uu dab xoogani qabsaday Xero Qaxooti oo ku taala Gudaha Magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari gaar ahaan dhacda dhanka Qorax u dhaca ama Xeebta .
Xeradan qaxooti ee uu dabku qabsaday ayaa waxaa lagu magacaabaa Tobanka Buush, waxayna ka tirsantahay Xaafada 1da Luulyo Boosaaso.
Dabka qabsaday Xeradaas ayaa waxaa uu baabi iyay dhamaan Guryihii ay dadkaasi degenaayeen oo markii hore ka sameysnaa cooshado ama baakado, Mana jirto ilaa iyo hada wax qasaare nafeed ah oo halkaasi ka dhashay marka laga reebo dhaawacyo yar yar oo uu dabku u geystay qaar ka mid ah dadkii halkaasi ku dhaqanaa.
Qaar ka mid ah dadka qaxootiga ah ee ku dhaqnaa guryaha gubtay ayaa SBC International u xaqiijiyay in dabkani uu ahaa mid ka dhashay Dab ay shidatay Haweeney ka mid aheyd dadka ku nool guryaha halkaasi ka dhisnaa ee gubtay.
Faarax Muuse waxa uu ka mid yahay dadkii ay ka baa be’een hoygoodii, waxaana uu sheegay in xiliga ay dhacdadani dhaceysay ay inta badani dada ku maqnaayeen magaalada si ay u soo dhacsadaan nolol maalmeedkooda, balse ay ka warheleen oo qura in goygii ay ka degenaayeen xeradaasi uu dab xoogani baa bi’iyay .
Markii uu dambakane soconayay ayaa waxaa goobta gaaray wafdi uu horkacayay Duqa degmada Boosaaso iyo masuuliyin kale, iyagoona halkaasi gaarsiiyay gurmadyo ay kaga hortagayaan dabkaasi, oo ay ka mid ahaayeen dab damisyada Degmada iyo booyadaha bulshada.
Ugu dambeyntii ayaa waxaa lagu guuleystay in inta badan dabkii baxayay la baqtiiyo inkastoo uu dhulka dhigay gebi ahaan guryihii ay dadkani goyga u ahaa iminkadana ay banana cilo ah ku soo dheceen.
Sikastaba ha ahaatee dadkani ayaa ah kuwo aan iminka heysan Hoy iyo hantiba, waxayna gar gaar ugaga fadhiyaan cid alaala cidii wax u qaban karta, iyagoo ugu baaqay hay’adaha samafalka in ay la soo gaaraan gar gaar deg deg ah.